Incazelo:ishubhu yesihlakala se-tube,i-tube clamp fittings australia,ishubhu lever clamp
Home > Imikhiqizo > I-Carbon Fiber Tube NeCampamp > Isigaxa se-Tube > 25mm aluminium tube clamp locking tube clamp u shape
I-Model No.: HCC-10
Izitolo ezisezingeni eliphakeme Zemikhiqizo Ephezulu YeMikhiqizo Yezimoto
12mm-30mm wangaphakathi wepayipi ungqimba wepayipi, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okukhangayo, ukwelashwa komhlaba ongaphezulu.
Ububanzi bangaphakathi: 20x30mm (ukusetshenziswa kwe-20x30mm octagon tube)
Isikulufa umgodi: M3
Amashubhu amaningi we-octagon egcwele esitokisini, i-oda elixubekile amukelekile.
Ukusika kwe-Axis Cnc
I-Cnc Ukusika i-Aluminium
4 Ukusika kwe-Axis Cnc
I-oda elincane le-Accpet & i-Serviceicer kuzoncika kumininingwane yemininingwane ukunikela ngezeluleko ezithile.
I-Hobbycarbon CNC LIMITEDis ingumkhiqizi we-OEM okhethekile emikhiqizweni yeCarbon fiber, insizakalo ye-carbon fiber CNC, ezinye izinsimbi ze-drones nezimoto. Ngezidingo ezandayo zebhizinisi lomkhiqizo, sandisa ibhizinisi lethu ekuqunjweni kwe-Aluminium CNC, sazinikela ekuhlinzekeni insizakalo ephelele kubathengi.
I-Cnc milling eziyindilinga eyindilinga yeshubhu yekhamera Xhumana Nanje
Nikeza Ngokuqondile i-Aluminium Metal Round Tube Hose Clamp Xhumana Nanje
I-30mm Round Tube Clamp Izimo eziguqukayo zeHobby Xhumana Nanje
I-Tube Clamp ixhumeka ngamabhodi e-Round Pipe Xhumana Nanje
I-Aluminium Tube Clamp ye-Multicopter / Boom Clamp Helikopta Xhumana Nanje
I-25mm aluminium tube clamp ngomphetho oyindilinga Xhumana Nanje
I-Carbon Fiber Tube Clamp ye-UAV Xhumana Nanje
I-aluminium tube clamp yepayipi le-carbon fiber eyindilinga Xhumana Nanje
ishubhu yesihlakala se-tube i-tube clamp fittings australia ishubhu lever clamp ishubhu yokuphakamisa intambo ishubhu clamp flange ishubhu clamp ltd ishubhu clamp australia ithebhu yokugcizelela kwetafula
ishubhu yesihlakala se-tube i-tube clamp fittings australia ishubhu lever clamp ishubhu yokuphakamisa intambo ishubhu clamp flange